Date My Pet » Mitadiava ianao Online Dating Down?
Last nohavaozina: Oct. 28 2020 | 3 min namaky
Ianao mahalala fa rehefa nandefa izany vao voavaly-jato e-mail, fa lehilahy tsara tarehy / vehivavy ianao Niady hevitra ny nivadika ho manambady, fa ny anankiray tena tiany dia nanjavona tsy amin'ny teny sy ny olona izay nihaona tamin'ireo tamin'ny herinandro lasa dia tsy maintsy nandefa ny sary izay folo, fara fahakeliny taona, satria tsy mijery zavatra toy izany ao amin'ny nofo! Mety ho somary hahakivy.
Tsy hoe ianao hoe ho snobby, ary ny marina no afaka mahatsapa ho toy ny olona rehetra izay mihaona amin'ny Internet na manao lalao no, mitady firaisana ara-nofo, tezitra amin'ny Chip eo amin'ny sorony momba ny taloha, dia voadonan'ny-mahatsiravina ny tapa-kazo ary avy eo dia sary-niantsena ny sary mba hahatonga azy ireo ho tahaka ny modely na tsotra fotsiny izy ireo voanjo! Raha tianao hohanina mafy izany dia tsy natao, ary izany no tena fomba afaka mahatsapa indraindray eto amin'izao tontolo izao ny aterineto mampiaraka. Indrindra raha mahazo jaded! Mampalahelo fa izany rehetra izany dia afaka ho reraka ianao, Kivy sy may avy. Amin'ny toe-javatra sasany dia mety hahatonga anao mihitsy aza manontany raha misy olona iray avy ho anao!
Amin'ny tranga ratsy indrindra fantatro ny olona mba hanipy any amin'ny servieta tanteraka, manambara fa mampiaraka amin'ny aterineto tsy miasa, na izay tena manana ny weirdos, na na inona na inona amin'ny endriny ny tantara milaza ny tenanao. Jereo Tsy miteny aho hoe tsy mahatsiaro ho ratsy rehefa toa mahatsapa fahadisoam-panantenana samy hafa iray, na izany aza inona no manao ny fiovana rehetra eto dia vola madinika eo amin'ny fomba fijery – kely fotsiny 'tweak' ny family ny alalan 'izay mijery aterineto mampiaraka.
Izay anananao mba hahatsiaro eto dia ny hoe manokatra ny mampiaraka amin'ny aterineto ny "tsena kendrena ', izay midika fa lehibe lavitra noho izany dia ho indray rehefa mampiaraka, ampiasaina mba haka toerana eo fotsiny ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny faritra manodidina an-toerana. Ary midika izany ianao dia mba hihaona rehetra isan-karazany ny olona. Tsy izy rehetra no ho lasa ny hatsaram-panahy ny olona, ary ianao tsy ho azy foana na. Mihatra aminao na inona na inona ny tena mahafinaritra ianareo sy ny hazandrano be ny mety ho. Eto amin'izao tontolo izao ny aterineto mampiaraka tsy manao be fahasamihafana, misy fotsiny hoe misy fe-'lava volo sy nianjera'. Ary azo inoana fa nisy 'boky' ny olona izay no mety hihaona eo anatrehanao mihaona raha ny marina 'ny olona', (raha tsy dia tena tsara vintana). Ary tsarovy izay olona iray ny fako dia ny harena hafa. Tonga ny olana rehefa mandray ny zava-drehetra manokana.
Ny zavatra hafa mba hahatsiaro dia fa rehefa nampiasa ny mampiaraka ny fomba lany andro taloha, izany hoe ny olona fihaonana mifanatrika, Matetika izahay mahalala kely ny momba azy ireo voalohany, na dia nisy afa-tsy izay izy ireo raha ny marina tahaka eo amin'ny tena fiainana. Na izany aza amin'ny aterineto tsy mampiaraka ianao, izany ianao dia ho avy ny olona maro manerana izay tsy ho nifidy ny hampiaraka raha efa nihaona izy ireo amin'ny olona. Na dia mamaky mombamomba tsy homeko anao be hevitra, satria rehefa rehetra, olona manolotra ny tsara indrindra ihany no lafiny eo amin'ny mombamomba azy. Aoka ny ho marin-toetra, dia inoana fa na iza na iza no hanoratra 'grumpy, narcissist amin'ny halitosis feno fitiavan-tena sy ny kely volo receding mitady vehivavy mahafinaritra ny fiaraha-misakafo mahandro ho azy '.
Ary noho izany dia mazava ho azy feh noho ny fa ho hiatrika ny olona fa tsy ho tia tahaka ny areti-mandringana. Ary ny sasany fotsiny ianao fa tsy liana amin'ny. Ny sasany tsy ho liana eo aminareo. Ny sasany dia toa liana ary avy eo dia hanjavona. Raha afaka manaiky fa izany rehetra izany dia ao anatin'ny fonosana amin'ny aterineto sy ny mampiaraka dia be dia hidiran-tsara kokoa. Amin'izay dia afaka mitsiky fotsiny, mihomehy ny tenanao sy ny hoe 'MANARAKA'. Avy eo dia hahazo tsara indray ny soavaly.
Aza kivy. Manao io tweak kely iray ny toe-tsaina momba ny aterineto mampiaraka, ary avy eo dia mahazo avy any, ary hiala voly no alehako fifandrindrana amin'ireo olona maro samy hafa. Chat, manadaladala, mandeha amin'ny daty sasany, mifalia, ary iza no mahalala, angamba ny 'ilay' fotsiny-dalana manaraka.